विश्वव्यापी आर्थिक विकास र बजारको माग द्वारा प्रेरित, मेरो देशको लग्गेज उद्योग विगत १० बर्षमा द्रुत रूपमा विकसित भएको छ, र बजारको बढ्दो मागले अधिकांश लग्जी कम्पनीहरूलाई द्रुत विकासको बाटोमा ल्याएको छ। व्यापार मोडेलको परिप्रेक्ष्यमा, घरेलु लग्ग ...
तपाइँको झोला परियोजना को लागी सटीक उद्धरण कसरी प्राप्त गर्ने?
धेरै ग्राहकहरूले ह्यान्डब्याग कारखानाहरूको खोजीमा रहेका उनीहरूको अनुकूलित ब्याकप्याक्सको लागि जति सक्दो चाँडो सहि उद्धरणहरू पाउने आशा राख्दछन्। यद्यपि बिभिन्न कारणहरूले गर्दा निर्माणकर्ताहरूले तपाईंलाई नमूना वा झोला विवरण बिना नै एकदम सही उद्धरण दिन गाह्रो छ। वास्तवमा, त्यहाँ प्राप्त गर्नका लागि एक तरीका छ ...
म विश्वास गर्छु कि सबैले न्यूनतम अर्डर मात्राको समस्या सामना गर्नुपर्नेछ जब निर्माताहरूलाई ब्याकप्याक ब्यागलाई अनुकूलित गर्न खोज्दै। किन प्रत्येक कारखाना मा एक MOQ आवश्यकता छ, र बैग अनुकूलन उद्योग मा एक उचित न्यूनतम अर्डर मात्रा के हो? ग्राहकका लागि न्यूनतम अर्डर मात्रा ...
एक मिनेटमा ब्याकप्याक उत्पादन प्रक्रिया बुझ्नुहोस्
ब्याकप्याक्सको उत्पादन प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दा धेरैले सोच्न सक्छन् कि ब्याकप्याक्स र कपडाको उत्पादन प्रक्रिया समान छ, जे भए पनि सिलाई मेशिन दुबैका लागि प्रयोग हुन्छ। वास्तवमा यो धारणा गलत छ। ब्याकप्याक र कपडाको प्रक्रियाको बीचमा पर्याप्त भिन्नता छ। सह मा ...
ब्याकप्याकको अनुकूलित लोगो शिल्प
ब्याकप्याक अनुकूलनमा लोगो मुद्रण विधि एक बारम्बार समस्या आएको छ। कर्पोरेट संस्कृतिलाई सुदृढ पार्न र कर्पोरेट छवि हाइलाइट गर्नको लागि, लोगो मुद्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। विशेष रूपमा, केहि कम्पनीहरूको डिजाइन अधिक जटिल छ र बुद्धिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ...